I-Flash Freezing Cannabis kanye ne-Cannabis Sublimation - Ukuphulukisa Cannabis
I-Flash freezing cannabis ne-cannabis sublimation ikhula ngokuthandwa phakathi kwabathandi be-cannabis. Imikhiqizo efana Ukhula Lomkhathi Sebenzisa lobu buchwepheshe ukwelapha insangu yabo evame ukuveza imbali eqinile. U-Luc Carlin ujoyina nathi ukuxoxa nge-cannabis sublimation kanye nokuphambuka kwakamuva kwezobuchwepheshe esikhaleni se-cannabis.
ISIQONDISO ESIQALILE: Ungayenza Kanjani iCannabis Yakho Kube Isikhathi Eside
ISIQONDISO ESIQALILE: Ukuthenga imbewu ye-cannabis online Ngokomthetho
I-Flash Freezing Cannabis ne-Cannabis Sublimation no-Luc Carlin
Ikhaya le-cannabis yilokho esikudingayo namuhla ukuze sibe nendlela evulekile embonini ye-cannabis ezifundazweni ezihlukene. Ezinye zezinto ezingcono kakhulu ezisetshenziswayo ze-cannabis zitshalwa ezindaweni zokugcina izithombo ngisho nasezindaweni ezikhulayo ezingemuva lapho umkhawulo wokukhula kwama-cannabis strains uchazwa kahle kakhulu.
Yiziphi Izindlela Zokukhula Kwasekhaya Kwe-Cannabis?
Sathola ithuba lokukhuluma nesivakashi sethu uLuc Carlin, owasebenza nalo mkhiqizo ngemuva kweminyaka eminingi embonini yokuzijabulisa yensangu njengomuntu onentshisekelo kwezentengiso ye-cannabis kanye nokusetshenziswa kwayo.
ULuc wasebenza nohlobo olubizwa ngokuthi i-Space Weed, umqondo we yelapha insangu ngesimo seqhwa. Kuyingxenye yenqubo ebizwa ngokuthi yi-cannabis sublimation. Namuhla, umkhiqizo ukhombisa isidingo esikhulu kakhulu phakathi kwabatshali be-cannabis kanye nabasebenzisi bakamuva bensangu.
Kungani I-Flash Freezing of Cannabis Ibalulekile Ikhwalithi Yensangu?
Sikhuluma ngezindlela ezihlukile zokukhula kwensangu ezindlini, singasho izindlela ezinjengokuqanda kwe-flash yensangu lapho izinqubo ze-sublimation zisetshenziselwa ukudala i-cannabis yeqhwa. Ngubuchwepheshe obushintsha imboni bungaphakathi bungaphandle.
Enye yezinqubo ezibaluleke kakhulu zokukhishwa kwemvelo ukukhishwa kwe-terpenes engasetshenziselwa eminye imikhiqizo emakethe.
Lapho ufuna ukushisa isitshalo, lesi sitshalo sidlula ngokushintsha ukuthungwa okuhlukahluka ngokuphelele kulokho okwedlule nokwakheka kwama-cannabis ngokuvamile.
Iyini Inqubo KaCannabis Sublimation Yangempela?
Ehlelweni lokunikezela, okuqukethwe komswakama kungama-7 kuye kwayi-14% ekuqaleni, kanti ama-terpenes athatha kakhulu okuqukethwe u-liquids esimweni sokuqala. Ekupheleni kwenqubo yokwengeza, iningi lama-terpenes aseseyingxenye yesitshalo, kanti ezinye izinto zithola iphunga nokunambitheka okuthe xaxa.
Ama-vapors and vaps asetshenziswa kakhulu ukudala umuzwa wethonya "eliphakeme" uma udonsa i-cannabis. Ukuthola i-cannabis okuyingxenye yezinqubo zokudlulisa kusebenza njengendawo enhle yokuqala ukusetshenziswa kwe-cannabis lapho ungazizwa khona futhi unambitha uhlangothi lwangempela lwe-cannabis.
Ungayiphatha Kanjani i-Cannabis Ngemuva Kwezinqubo Zokufaka I-Cannabis Sublimation?
Ngemva kokuba inqubo yokubekwa phansi kwe-cannabis, ungasebenzisa i-cannabis ezimweni eziningi ezahlukahlukene. Lapho ama-terpenes elondoloziwe, unokokukhishwa okukhona ngokwemvelo esitshalweni se-cannabis. Inqubo yokudluliselwa kwengqondo isebenzisa ubuchwepheshe bokunqanda inyama ukwehlisa isibalo semithi yokubulala izinambuzane esitshalweni.
Umkhakha we-cannabis kungenzeka ukuthi uhlukanise imikhiqizo ehlukile ye-cannabis. Ukunikeza imakethe okuthile okufana ne-cannabis mahhala kokubumba namayeza okubulala izinambuzane kungaba yithuluzi elisebenzayo lokwenza amamodeli ehlukene webhizinisi ngokuzayo.